» “भाइरल डोजर वालिले देखाइन खत्रा डान्स”!,डोजर चालाएको खबर पाउँदा घरमा यति धेरै खुसियाली छायो ! (भिडियो हेर्नुहोस) “भाइरल डोजर वालिले देखाइन खत्रा डान्स”!,डोजर चालाएको खबर पाउँदा घरमा यति धेरै खुसियाली छायो ! (भिडियो हेर्नुहोस) – हाम्रो खबर
“भाइरल डोजर वालिले देखाइन खत्रा डान्स”!,डोजर चालाएको खबर पाउँदा घरमा यति धेरै खुसियाली छायो ! (भिडियो हेर्नुहोस)
भिडियो तलको समाचारको अन्त्यामा छ। अहिले चियावालीको उपनामले सामाजिक संजालमा निकै नै भाइरल बनेकी नुवाकोटकी सृष्टि तामाङ जो आफ्नो दुई वर्षको आफ्नो दुधे बालकलाई आफ्नो पिठ्युँमा बोकेर रातको तीन बजेदेखि चिया बनाउँदै र बेच्दै आउनुभएको छ। उहाँको संघर्षको यो दृश्यलाई गोदावरीका एकजना फोटो पत्रकार गजेन्द्र राज नेम्बाङले सामाजिक संजालमार्फत सेयर गर्नुभयो र यो दृश्य यतिबेला संसारभर भाइरल बन्न पुग्यो।